Shower Head ကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းရေး လုပ်မလဲ။ Shower Nozzles အတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အကြံပြုချက်များ သတင်း- Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
ယေဘူယျအိမ်ထောင်စုများသည် ရေချိုးခန်းများကို တပ်ဆင်ကြမည်ဖြစ်သော်လည်း ရေချိုးခန်းအမျိုးအစားများ ကွဲပြားမည်ဖြစ်ပြီး ကွဲပြားသောပုံစံများနှင့် အမှတ်တံဆိပ်များလည်း ကွဲပြားမည်ဖြစ်သဖြင့် ရေချိုးခြင်းအကြောင်းအချို့ကို နားလည်ထားရန် လိုအပ်ပြီး ရေချိုးခန်းများသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပိတ်ဆို့ခြင်းပြဿနာရှိလျှင် ရေချိုးခေါင်းပါဇယ်ကို မည်သို့သန့်ရှင်းရမည်နည်း။ Shower Nozzle အတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ။
ä¸€။ Shower Nozzle ကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းရေး လုပ်မလဲ။
1. ရေချိုးခန်း နော်ဇယ်သည် ရေကော်လံကို ရေထွက်ပေါက် အများအပြားမှ လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးကာ အရေပြားအပေါ် သက်ရောက်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး နှိပ်နယ်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း ရရှိစေပါသည်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အခါတွင် အပ်ချုပ်ရန် ချည်ထိုးအပ်များကဲ့သို့သော သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာဝတ္တုငယ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပလပ်ပေါက်၏ အတွင်းနံရံမှ စကေးပြုတ်ကျစေရန် ပလပ်ပေါက်တစ်ခုစီတွင် အပ်များကို တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး ထိုးဖောက်ပြီးနောက် ရေဝင်ပေါက်မှ နော်ဇယ်ထဲသို့ ရေလောင်းကာ လှုပ်ခါပြီး ရေကို လောင်းထည့်ကာ စကေးကို အပြည့်အဝသန့်စင်နိုင်စေရန်၊ .
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖြူရောင်ရှာလကာရည်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်နည်းလမ်းမှာ သင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိသော ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲတွင် ရေအနည်းငယ်နှင့် ရှာလကာရည်ဖြူအရောအနှောကို ထည့်ကာ နော်ဇယ်ကို ပတ်ကာ အပေါ်ပိုင်းကို ကြိုး သို့မဟုတ် ရော်ဘာကြိုးဖြင့် ချည်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ဤတွင် ရှာလကာရည်သည် ကယ်လ်စီယမ်ကာဗွန်နိတ်ကို ပျော်ဝင်စေသည့် နိယာမဖြစ်သည်။
3. လျှပ်စစ်ပလပ်စတစ်မျက်နှာပြင်များပါရှိသောဖြန်းဆေးများအတွက်၊ သန့်ရှင်းရေးအပြင် မျက်နှာပြင်၏နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းမှုကို ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အသုံးပြုပြီးနောက် မျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်ကို ချောမွေ့စေပြီး တာရှည်ခံစေရန် ဂျုံမှုန့်ဖြင့် စွန်းထင်းနေသော ပျော့ပျောင်းသောအထည်ကို မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။
äºŒ။ Shower Nozzle ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။
1. 1-2 နှစ်တစ်ကြိမ် ရေပေးဝေသည့်ပိုက်ကို စစ်ဆေးရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် အကြံပြုထားသည်။ ရေပိုက်ကို အစားထိုးခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသော အလုပ်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းကို ပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ပညာရှင်ထံ ထားခဲ့ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အစပိုင်း သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် ရေပိုက်ကို အစားထိုးသည့်အခါ အလုပ်သမားသည် နံရံတွင် angle valve တပ်ဆင်ထားခြင်းရှိမရှိကို အာရုံစိုက်ပါ။
2. ရေချိုးခေါင်း၏ အသုံးဝင်သော သက်တမ်းကို သေချာစေရန်အတွက် ရေချိုးခန်းအပူပေးစက်ကို တပ်ဆင်သည့်အခါတွင် ၎င်းကို ဝေးဝေးတွင်ထားရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ရေချိုးခန်းအပူပေးစက်နှင့် အကွာအဝေးသည် 60 စင်တီမီတာထက် ကျော်လွန်၍ နူးညံ့သောအ၀တ်စကို မကြာခဏ အသုံးပြုပါ။ ရေချိုးခန်းရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို အသစ်လို ငြိမ်နေအောင် ဂျုံမှုန့် အနည်းငယ် သုတ်ပါ။
3. ရေချိုးခန်းမျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းစေရန်အတွက် မျက်နှာပြင်ကို ဂျုံမှုန့်ဖြင့် သုတ်ရန် နူးညံ့သောအ၀တ်စကို မကြာခဏအသုံးပြုကာ မျက်နှာပြင်ကို ချောမွေ့စေရန် ရေဖြင့် ဆေးကြောပါ။ သွားတိုက်ဆေးကဲ့သို့ ရေချိုးခန်း၏ မျက်နှာပြင်ကို ပွတ်တိုက်ရန် သွားတိုက်ဆေးကို အသုံးပြုပါ။3မိနစ်ခန့်ကြာအောင် ရေသန့်ဖြင့်ဆေးချပြီး ခြောက်အောင်ထားပါ။
နောက်တစ်ခု:Shower Head တပ်ဆင်နည်း